moi: January 2018
သြစတြေးလျနိုင်ငံ အမျိုးသားနေ့ အထိမ်းအမှတ်ဧည့်ခံပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ
သြစတြေးလျနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားနေ့ အထိမ်းအမှတ်ဧည့်ခံပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့ညနေ ၆ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ Hiltol Hotel ၌ ကျင်းပရာ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး တက်ရောက်သည်။
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆဋ္ဌမနေ့ကျင်းပ
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆဋ္ဌမနေ့ကို ယနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် နေပြည်တော် ရှိ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်၊ မိတ္ထီလာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်နှင့် မုံရွာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်များတွင် ပညာသင်ကြား လျက်ရှိသော ကျောင်းသား/သူများအား လုပ်ငန်းခွင်လက်တွေ့လေ့လာရေး ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးညှိနှိုင်း
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့၏ ညှိနှိုင်းရရှိချက်အရရန် ကုန်စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်၊ မိတ္ထီလာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်နှင့် မုံရွာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်များတွင် ပညာသင်ကြားလျက်ရှိသော ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများအား စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာနရှိ ဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများတွင် လုပ်ငန်းခွင် လက်တွေ့လေ့လာရေး (Internship) ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးအား ယနေ့မွန်းလွဲ (၁) နာရီခွဲတွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၌ ကျင်းပသည်။
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ရန် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ရန် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
တိုင်းရင်းသားအရေးနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး အလေးထားဆောင်ရွက်ရမည်ဟု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးပြောကြား
လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် အသစ်ဖွင့်လှစ်သည့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ဦးစီးဌာန၏လုပ်ငန်းများ ပီပြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ညှိနှိုင်း ဆွေနွေးပွဲကို ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်း၌ အဆိုပါဝန်ကြီးရုံး အစည်းအဝေးခန်းမတွင်ကျင်းပရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ၀င်းမြတ်အေး၊ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်၊ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နိုင်သက်လွင်တို့ တက်ရောက်သည်။
Posted by moi at 7:11 PM No comments:
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်‌ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်‌သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ စကော့အလန် မာစီရယ်လ်အား ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
Posted by moi at 6:16 PM No comments:
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေမြင့် သြစတြေးလျနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေမြင့်သည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သြစတြေးလျနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Nicholas Coppel အား ယနေ့မွန်းလွဲ ၃ နာရီတွင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
Posted by moi at 6:06 PM No comments:
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သြစတြေးလျနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအားတွေ့ဆုံ
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေသည် မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ သြစတြေးလျနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး Mr. Nicholas Coppel နှင့်အဖွဲ့အား ယနေ့ညနေ(၄)နာရီ(၁၅)မိနစ်တွင် နေပြည်တော်ရှိ အဆိုပါဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ တွေ့ဆုံသည်။
Posted by moi at 5:54 PM No comments:
(၁၉) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-ပြန်ကြားရေး ဆပ်ကော်မတီ အစည်းအဝေးကို အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပနိုင်ရေး ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေး
(၁၉)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ-ပြန်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ (19th SCI) အစည်းအဝေးကို မြန်မာနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ကျင်းပရာ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေမြင့် တက်ရောက် အမှာစကားပြောကြားသည်။
Posted by moi at 5:42 PM No comments:
သစ်တောသုတေသနဌာန စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး နည်းပညာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု စီမံကိန်း စတင်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ကနဦးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲဖွင့်
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့ (FAO) တို့ပူးပေါင်း၍ သစ်တောသုတေသနဌာန စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးနည်းပညာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု စီမံကိန်း စတင်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ကနဦးအလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ဇန်နဝါရီ ၃၀ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက နေပြည်တော်ရှိ Hotel Royal ACE တွင် ကျင်းပရာသယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဒေါက်တာညီညီကျော် တက်ရောက်အမှာစကား ပြောကြားသည်။
Posted by moi at 4:41 PM No comments:
U Henry Van Thio, Vice President and Chairman of the National Water Resources Committee, yesterday said further attention into how the country disposes of wastewater should be prioritized.
Posted by moi at 10:32 AM No comments:
The opening ceremony foranew building at Suu Vocational Institute was conducted by the education network of the National League for Democracy (NLD) in the school compound in Hlinethaya Township yesterday morning.
Myanmar’s growing electricity needs
Interview with Union Minister for Electricity and Energy U Win Khaing
The consumption rate of electricity in Myanmar is increasing at least 15 per cent each year, and it is estimated that Myanmar is expected to consume about 4,531 megawatts of electricity in 2020-2021. Currently, the annual total electricity production is 3,189 megawatts, with 1,342 megawatt still needed.
According to the bilateral agreement made by Myanmar and the Bangladesh governments, the relocation and resettlement programmes will be resumed in Taung Pyo Letwe, Nga Khu Ya and Hla Pho Khaung camps.
MPs discuss fund for the disabled, tax exemption
The eighth-day meeting of the seventh regular session of the second Amyotha Hluttaw was held yesterday morning in the Amyotha Hluttaw meeting hall.
20th Shwekyin Nikaya Conference begins in Hmawbi
20th Shwkyin Nikaya conference was held atamonastery in Hmawbi Township, on the outskirts of Yangon yesterday.
Posted by moi at 10:20 AM No comments:
Posted by moi at 10:18 AM No comments:
As part of efforts for disseminating knowledge to the local people in Kawthoung Township, Myanma Radio and Television of the Ministry of Information donated 50 Set Top boxes to Taninthayi Region Government yesterday.
A suspicious person caught dead near Maungni Village, Maungtaw Town
Security personnel were conducting security operations near Maungtaw Town, Maungni Village at7p.m. on 26 January when they found three suspicious persons.
Villager murdered in Buthidaung Township
A 71-year-old man from Ngetthay Village in Buthidaung Township was found dead inanearby forest on 20 January.
Posted by moi at 10:13 AM No comments:
ပြည်သူ့စကားဝိုင်း တုနှိုင်းမမီ တိုင်းကားပြည်ဝယ်
မြေမြင်းမိုရ်သည်စိမ်းစိမ်းရွှင်ရွှင် မြက်သစ်ပင်တို့အားဖွံ့ထွားစည်ပင်ရန် ကျေးဇူးပြုဘိသကဲ့သို့ လူထုအခြေပြု ဗဟိုဌာနမှာလည်း လူထုအား ပညာအလင်းပြမည့်ဌာနအဖြစ်သို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲလျက် ရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်တွေ့ရှိရလေသည်။
တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးများ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင် မြန်မာနိုင်ငံစက်မှုကုန် ထုတ်လုပ်သူများအသင်း၏ (၂၂) ကြိမ် မြောက် အသင်းသားစုံညီ နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်
မြန်မာနိုင်ငံစက်မှုကုန် ထုတ်လုပ်သူများအသင်း၏ (၂၂) ကြိမ်မြောက် အသင်းသားစုံညီ နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေး ကို ယနေ့မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်၊ ရန်ကုန်မြို့၌ ကျင်းပသည်။
Posted by moi at 8:47 PM No comments:
မိခင်ဝိုင်းများတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် လေဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ပြင်ဆင်ရေးနှင့်‌ လူမှု ကာကွယ် စောင့်‌ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းများပြည်သူအကြား ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်
လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးစိုးအောင် သည် ဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက်တွင် ရှေးဦးအရွယ် ကလေးသူငယ် ပြုစုပျိုးထောင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည့် မိခင်ဝိုင်းများ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွက် မင်းဘူးမြို့ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနနှင့် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ ဖွင့်လှစ် သင်ကြားလျှက်ရှိသော မင်းဘူးမြို့နယ် ကျေးရွာ (၅) ရွာမှ သင်တန်းသူမိခင်များနှင့်‌ပံ့ပိုးသူများအဖွဲ့ကို မွန်းလွဲပိုင်းတွင် သွား‌ရောက် တွေ့ ဆုံသည်။
ဗုိလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအတ္ထုပ္ပတ္တ်ိရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ရေး ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်
ဗုိလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအတ္ထုပ္ပတ္တ်ိရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ရေးရုံးခန်းဖွင့်ပွဲနှင့် အလှူငွေပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက် (၁၀) နာရီက ရန်ကုန်မြို့ ဗဟန်းမြို့နယ် ကမ္ဘာအေးစေတီလမ်းရှိ ကမ္ဘောဇရိပ်သာ (ချင်းချောင်းနန်းတော်) ၌ ကျင်းပသည်။
Posted by moi at 8:26 PM No comments:
ညောင်ဦးမြို့နယ် ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းဘေးတွင် ပလင်းကမ်းသာယာ ဆင်စခန်းဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်မည်
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်း သည် ဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက်တွင် ညောင်ဦးမြို့နယ်၊ ပလ္လင်ကန်ကျေးရွာအနီး အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်း စိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် ကိုရီးယား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (KOICA) တို့ ပူးပေါင်း၍ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် စိုက်ပျိုးခဲ့သော KOICA (Phase IV) သစ်တောစိုက်ခင်း (၅၉၃)ဧက စိုက်ခင်း အောင်မြင်မှုများအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း လူမှုကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်မှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မန္တလေးမြို့တွင် လူမှုကူညီရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ဗြဟ္မစိုရ်လူမှုကူညီရေးအသင်း၏ လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သော အထူးစောင့်ရှောက်မှု လိုအပ်သော ကလေးငယ် များအတွက် နေ့ပိုင်းစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာ နှစ်ပတ်လည်နေ့ အခမ်းအနားကိုယနေ့ နံနက်ပိုင်းက အသင်း ၏ ပညာဒါနကျောင်းဆောင်တွင် ကျင်းပရာ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဝင်းမြတ်အေး တက်ရောက်အမှာစကား ပြောကြားသည်။
Four Objectives of the 71th Anniversary Union Day
1. To develop the Union Spirit
2. To make the internal peace processasuccess with unity of ethnic people
3. To buildaFederal Democratic Union through the Union Peace Conference-21st Century Panglong
4. To boost the economy of the Union by encouraging small and medium enterprises
Individual trade from Myanmar-China borders hits nearly Ks1.7 billion
Individual trade through the Myanmar-China cross-border points, as of 12 January, reached some Ks1.7 billion, according to the official statistics from the commerce ministry. Using individual trading cards (ITCs), border traders imported some Ks1.7 billion worth of domestically produced goods in the last 10 months of this financial year, including Ks38 million from the Muse border gate, Ks70 million from the Lwejel gate, Ks4 million from the Chinshwehaw point and nearly Ks1.6 billion from the Kanpaiktee trade station. However, no import trade was carried out through the Kengtung border this fiscal year (FY).
President U Htin Kyaw arrives back from Singapore
President U Htin Kyaw returned from Singapore and arrived in Nay Pyi Taw yesterday after receiving medical checkups in Singapore.
State Counsellor views parade celebrating India’s 69th Republic Day
Pressure often turns into counterproductive: Deputy Information Minister U Aung Hla Tun
State Counsellor meets Indian Prime Minister
State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi met Mr. Narendra Modi, Prime Minister of India, at Hyderabad House, the state guest house, in New Delhi on Wednesday evening.
State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi attendedameeting between Indian Prime Minister Narendra Modi and ASEAN leaders at the Presidential House in New Delhi yesterday.
Union Minister for Information Dr Pe Myint inspected the offices of the Information and Public Relations Department (IPRD) in Dawei Town and the Myanma Radio and Television (MRTV) sub-transmitting station in Launglon Township.
Ministry of Industry unveils MEB’s SME policies and loan plans
The Ministry of Industry held an event to disclose the small and medium enterprise (SME) policies and loan plans of Myanma Economic Bank (MEB) yesterday in Loikaw Town.
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေမြင့် ထားဝယ်မြို့ရှိ ပြန်/ဆက်ရုံးများနှင့် လောင်းလုံးမြို့နယ်ရှိ ရုပ်မြင်သံကြား ထပ်ဆင့်လွှင့်စက်ရုံတို့ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
ထားဝယ် ဇန်န၀ါရီ ၂၅
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေမြင့်သည် ယနေ့တွင် တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီး ထားဝယ်မြို့ရှိ ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးရုံးများနှင့် လောင်းလုံးမြို့နယ်ရှိ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြား ထပ်ဆင့်လွှင့်စက်ရုံတို့ကို လိုက်လံကြည့်ရှု စစ်ဆေးသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ်နှင့် အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံ့အကြီးအကဲများ၏ သီးသန့်အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်
နယူးဒေလီ ဇန်န၀ါရီ ၂၅
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဒေသစံတော်ချိန် ယနေ့မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် နယူးဒေလီမြို့ရှိ သမ္မတအိမ်တော် (Rashtrapati Bhavan)၌ အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ မစ္စတာ ရမ် နက်သ် ကိုဗင့်ဒ်က အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ အကြီးအကဲ များအား တည်ခင်းဧည့်ခံ သည့် ဂုဏ်ပြုနေ့လယ်စာစားပွဲသို့ တက်ရောက်သည်။
Posted by moi at 9:06 PM No comments:
ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး မြိတ်နှင့်ကျွန်းစုမြို့နယ် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူသည် ယနေ့တွင် တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီး မြိတ်ခေတ် မီငါးလေလံဈေးစီမံကိန်း တည်ဆောက်မည့်မြေနေရာ၊ မြိတ်မြို့ပြည်သူ့ ၀န်ဆောင်မှုရုံး (OSS)၊ ကျွန်းစုမြို့နယ် ကတ္တလူကျေးရွာ ရေငန်ပုဇွန် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ ပထော်ပထက်ကျွန်းရှိ အအေးခန်းစက်ရုံနှင့် သစ်အချောထည် စက်ရုံတို့ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် သတ္တမ ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆဋ္ဌမနေ့ကျင်းပ
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းဝေး ဆဋ္ဌမနေ့ကို ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ကျေးလက်လမ်းများ၏ ဒီဇိုင်းနှင့် စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များ ပြန်လည် သုံးသပ်ခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ကျေးလက်လမ်းများ၏ ဒီဇိုင်းနှင့်စံနှုန်း သတ်မှတ်ချက်များ ပြန်လည် သုံးသပ်ခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက် နံနက် ၉နာရီတွင် နေပြည်တော် ၊ Hotel Park Royal ၌ ကျင်းပရာ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးကျော်လင်း တက်ရောက်ပြီး အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားသည်။
Posted by moi at 6:13 PM No comments:
ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆဋ္ဌမနေ့ ကျင်းပ
ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီး အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အတွက် ပြည်ထောင်စု ရန်ပုံငွေအပြင် သီးသန့် အထူးဦးစားပေး အစီအစဉ်ဖြစ်သော နိုင်ငံတကာချေးငွေနှင့် အထူးရန်ပုံငွေများ ရရှိရန်အတွက် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး Public Private Partnership (PPP) စနစ်ဖြင့်လည်း ဆောင်ရွက်ရန် လျာထားလျက် ရှိပါကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးကျော်လင်းက ရှင်းလင်း ဖြေကြားသည်။
Posted by moi at 5:07 PM No comments:
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံ
မြစ်ကြီးနား ဇန်နဝါရီ ၂၅
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်ဝင်းသည် ယနေ့နံနက်(၉)နာရီခွဲ တွင် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ ဆမားဒူဝါဆင်ဝါးနော် ခန်းမ၌ ဝန်ကြီး ဌာနလက်အောက်ရှိ ဦးစီးဌာနများ၊ ဘဏ်ဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံ အမှာစကား ပြောကြားသည်။
Posted by moi at 4:32 PM No comments:
ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ အကြံပေးအဖွဲ့မှအဖွဲ့ဝင်များ၊ အတွင်းရေးမှူးရုံး ၀န်ထမ်းများ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းဌာနများမှ သတင်းထောက်များ ပါဝင်သောအဖွဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောဒေသနှင့် ကျောက်ဖြူမြို့တို့၌ ကြည့်ရှုလေ့လာ
သံတွဲ ဇန်န၀ါရီ ၂၄
နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံရုံး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေ၊ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ရုံး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်းနှင့် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာချထားရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဒေါက်တာ ၀င်းမြတ်အေးတို့ ဦးဆောင်သော ရခိုင်ပြည်နယ် ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီ အကြံပေးအဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်များ၊ အတွင်းရေးမှူးရုံးဝန်ထမ်းများ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းဌာနများမှ သတင်း ထောက်များ ပါဝင်သော အဖွဲ့သည် ယနေ့နံနက် ၈ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် နေပြည်တော်မှ လေကြောင်း ခရီးဖြင့် စစ်တွေမြို့သို့ ရောက်ရှိကြသည်။
Posted by moi at 10:52 AM No comments:
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အိန္ဒိယ သမ္မတနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာ
နေပြည်တော် ဇန်န၀ါရီ ၂၄
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့တွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၅၊ ၂၆ ရက်တွင် ကျင်းပမည့် အာဆီယံ- အိန္ဒိယ ဆွေးနွေးဘက် ဆက်ဆံရေး (၂၅)နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ် ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ (၆၉)နှစ်မြောက် အမျိုးသားနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ရန် အတွက် ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှ အထူးလေယာဉ်ဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာ သွားသည်။
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် သတ္တမ ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့ကျင်းပ
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် သတ္တမ ပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့ကို ယနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပ သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဖေမြင့် ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး ဦးစီးဌာန၏ (၂၇) နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်နေ့ အခမ်းအနား တက်ရောက် အမှာစကား ပြောကြား
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး ဦးစီးဌာန၏ (၂၇)နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်နေ့ အခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။